Izitifiketi ze-SSL ezisayiniwe ku-Chrome 58 > UVielhuber David
Izitifiketi ze-SSL ezisayiniwe ku-Chrome 5811
Njengoba Masibethelwe , amawebhusayithi abethelwe manje asejwayelekile. Ngisho nentuthuko yasendaweni, izitifiketi ze-SSL sezibaluleke kakhulu (ngokwesibonelo, i- navigator.geolocation idinga ukubethela kwe-SSL endaweni yangakini). Kusukela inguqulo 58 ye-Chrome, ukusekelwa kwe-CN (Igama Elijwayelekile) kuyekisiwe futhi i-SAN (Igama Elinye Igama Lesifundo) yenziwe yaba yisibopho. Njengomphumela, i-Chrome ngokuzumayo ayisazamukeli zonke izitifiketi ze-SSL ezenziwe ngokujwayelekile .
Ungasebenzisa amathuluzi aku-inthanethi afana ne- ZeroSSL ukudala izitifiketi noma usebenzise amapharamitha wokuqalisa njengama --ignore-certificate-error noma i-flag chrome: // flags / # allow-insecure-localhost ukuze i-Chrome isebenze ngaphandle kwezitifiketi ezisemthethweni; Kodwa-ke, sifuna ukusebenzisa i-OpenSSL ukudala izitifiketi ezizisayinela endaweni eziqukethe i-SAN futhi zamukelwa ngokuphelele yi-Chrome. Le liner eyodwa yenza konke okudingekayo (kuphela i-www.tld.local kufanele ishintshane ngesizinda osifunayo):
Njengoba ngeshwa i- OpenSSL ingenazimpikiswano eziqondile zokucacisa i-SAN, ifayela lokumisa lakhiwa kuqala, i-OpenSSL ibizwa ngalo bese ifayela liyasuswa. Abasebenzisi beWindows bangawenza kalula lo myalo ngosizo lweCygwin (kanye ne-bash -c "...") noma nge- WSL entsha. Amafayela amabili aholelwayo athi www.tld.local.key nethi www.tld.local.cert angabe esekhethwa ku-MAMP, ngokwesibonelo:
Abasebenzisi beWindows balayisha ngaphansi kwe- "Phatha izitifiketi zomsebenzisi" (i-certmgr) ku- "Iziphathimandla zezitifiketi ezithembekile":
Ekugcineni, qala kabusha i-Chrome (chrome: // restart) futhi ujabulele ukukhiya okuluhlaza: